हो रहेछ ! स,म,स्या बाजा बजाएर आउँदैन – Jagaran Nepal
हो रहेछ ! स,म,स्या बाजा बजाएर आउँदैन
काठमाण्डौ – भनिन्छ कुनै पनि समस्या बा,जा, बजाएर आउँदैन । मुलुकले यतिखेर त्यस्तै नसोचेको र पूर्वानुमान नगरिएको दोहोरोे विपत्तिको सामना गरिरहेको छ । चीनको एक कुनामा देखिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा आएर दुःख देला भन्ने हाम्रो कल्पनामै थिएन तर हामी अहिले त्यो महामारीको प्रत्यक्ष मारमा परेका छौँ ।
यसपालि यो अकल्पनीय कोरोनाको कहरमात्र नभएर हामीलाई विनासकारी विपद्ले पनि दुःख दिएको छ । यो विपत्तिले मानिसको ज्यान लिएसँगै भौतिक र आर्थिक क्षति गराइरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण हुनुको साटो झन्भन्दा झन् बढ्दै गएको देखिएको छ । यसबीचमै मनसुनजन्य विपत्तिको अर्काे चुनौतीले देशको जनजीवन र भूगोललाई नै थिलथिलो बनाइरहेको छ । हरेक दिनजसोको मनसुनी वर्षा पछिको पहिरो, बाढी र डुबान वस्तीवस्तीमा काल बनेर पसेको छ । त्यसैले पनि अहिले हामीलाई आपतमाथि झन् ठूलो विपत बर्सिरहेको भान भइरहेको छ ।
हरेक दिनजसो पहिरोमाथि पहिरोका दुर्घटना थपिएका छन् । पहिले पहिलेका मनसुनी वषामा हुनेभन्दा बढी नै यसपालि बाढी पहिरोले बस्ती नै सोहोरेका छन् । कोभिड–१९ बाट निधन को ग्राफ बढ्दै गर्दा यसपालीको मनसुनजन्य विपद्का कारण पनि निधन को ग्राफ विगत १० वर्ष कै उच्च बन्न पुग्यो ।
आइतबारसम्मको विवरणमा कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा १०४ जनाको निधन भएको छ भने २६ हजार ६६० जना सङ्क्रमित भएका छन् । मनसुन सक्रिय भएको दिन २०७७ जेठ ३१ पछि मनसुनजन्य विपदमा परेर पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै २३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पहिरोबाट मात्रै २०६ ले ज्यान गुमाए । सँगसँगै आएको यी दुई महाविपत्ति नेपालको इतिहासकै एक अति कठिन समय बन्न पुगेको छ ।
सदाझैँ आजको रात त बाँचियो भनेर विहान अन्दाजी साढे ६ बजे त्रिपालबाट उनीहरु घर फर्किए । दिनभर घरखेतको काम भ्याएर केही निमेष आफन्त र छरछिमेकसँग रम्ने योजना त्यतिखेर तुहियो, जब माथिको डाँडाबाट पहिरो खस्यो । १३ घरका ३९ जना एकै निमेषमै पु,रि,ए । कोही घरभित्रै अनि कोही भाग्दाभाग्दै माटोमा बिलाए । सोमबारसम्म प्राप्त विवरणमा २२ को श,,व फेला परे पनि अन्य पहिरोमै पुरिएका छन् । कतिपय घरका सपरिवारका लागि यही पहिरो का,ल ब,न्यो ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट जुधिरहेको मुलुकमा यसपटकको प्राकृतिक विपत्तिले ठुलै जनधनको क्षति गरायो । त्यसको प्रतिनिधि घटना हो लिदी पहिरो । यसअघि असार २५ मा पनि सिन्धुपाल्चोककै जम्बुबजार र भोटेकोरीमा आएको बाढी पहिरोमा परेर केहीको निधन भएको थियो भने २० जना वेपत्ता भएका थिए ।सबैभन्दा बढी, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, जाजरकोट, कास्की, बझाङ, पर्वत, पाल्पा, लमजुङ्, गुल्मी, दार्चुलालगायत जिल्लामा ठुलो जनधनको क्षति हुनेगरी पहिरो खसेको छ । यस्ता विपद् यसपाली ६० भन्दा बढी जिल्लामा निम्तियो ।
कोरोना फैलनबाट रोक्न खटिँदै आएका नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तत्काल प्राकृतिक विपद्को उद्धारमा खटिए । पहिरोले पुरिएकाको खोजी र उद्धार भइरहेकै बेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कोभिड–१९ बाट नागरिकलाई जोगाउन सङ्घर्षरत छन् । लिदीमा गएको पहिरोमा पुरिएकाको उद्धार हुँदै गर्दा त्यसदिन अपराह्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम सङ्क्रमणबारे यसरी प्रत्यक्ष प्रशारणमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, “पछिलो चौबीस घण्टामा मुलुकमा ५९४ जना कोभिड १९ का नयाँ सङ्क्रमित भेटिए, यो सँगै अहिलेसम्म २५ हजार ५५१ जना पुगे । त्यसमध्ये १७ हजार ७७ उपचार पछि घर फर्किएका छन् । एकै दिनमा चार जनाको निधन भएको र हालसम्म निधन हुने ९९ पुगेका छन् ।” आइतबारसम्म मुलुकमा २६ हजार ६६० जना सङ्क्रमित भएका छन् । त्यसमध्य १०४ जनाको निधन भएको छ ।
यही साउन २२ देखि २९ गतेसम्मको आठ दिनमा मात्रै कोभिड–१९ सङक्रमित ३५ को निधन भएको छ । विश्वको तुलनामा समग्रमा नेपालको निधन दर न्यून (शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत) छ, तर पछिल्लो ग्राफले त्यसलाई उच्च बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतम निधन को ग्राफ बढ्दै गएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म १०४ को निधन हुँदा साउन अन्तिम साताको ८ दिनमा मात्रै ३५ को निधन हुनु सामान्य होइन । कोभिड–१९ बाट एकै दिन आठ जनासम्मको निधन भएको छ ।
जब जेठबाट कोभिड–१९ को स,ङ्क्र,म,ण तीन अङ्कले ब,ढ्न थाल्योे तब मुलुकले पनि अर्काे मनसुनजन्य विपत्तिको सामना गर्नुपर्यो । अहिले पनि देशमा आपतमाथिको विपद् कायमै छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने भन्दै जेठ २९ बाट मुलुकमा बन्दाबन्दी खुकुलो बनायो । त्यसको भोलिपल्ट जेठ ३० पछि मनसुनजन्य विपद्मा जनधनको क्षति हुन थाल्यो । मनसुन शुरु भएको पहिलो दिन जेठ ३१ मा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा भेलपहिरो खस्दा ९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाए ।
असार ८ गते पाल्पाको सम्बोबारीमा ४ जना पहिरोमा परे । असार २० गते बझाङको केदारस्युँलगायत स्थानमा पहिरो जाँदा सात जनाको निधन भयो । असार २६ मा भारी वर्षा हुँदा म्याग्दीको धवलागिरि, मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा खसेको पहिरोमा २७ जनाको निधन र ४ बेपत्ता भए । असार २५ गते सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकास्थित जम्बुबजार र भोटेकोसी गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोका कारण तीन जनाको निधन भएको र २० बेपत्ता भए ।
असार २६ गते बिहान कास्कीको सराङकोट, हेम्जा र पैतेडाँडामा पनि सोही समयमा पहिरोले सातको निधन भएको थियो । सोही समयमा जाजरकोटको बारेकोट लगायतस्थालनमा पहिरोले नौ जनाको निधन भएको छ ।गुल्मी र लम्जुङमा बाढीपहिरोमा परेर नौ जनाले ज्यान गुमाए । भूगर्भविद् शिवकुमार बाँस्कोटा जथाभावी सडक खन्ने, पानीको स्रोत व्यवस्थापन नहुने तथा एकै ठाउँमा धेरै पानी परेको र भूकम्पले असर गरेकाले बाढीपहिराका घटना बढेको बताउनुहुन्छ ।
अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ बाट सङ्क्रमित र निधन को विवरण प्रत्यक्ष प्रशारण गरेर दैनिक सार्वजनिक गरिरहँदा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पनि प्राकृतिक विपद्को बारेमा पनि दैनिक जानकारी दिने काम भइरहेको छ वर्षेनी बाढी पहिरोका घटना भइरहेकै छन् तर रोक्न सकिँदैन । तर न्यूनीकरण र क्षति कम गर्ने उपाहरु भने अपनाउन सकिन्छ । आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा र विपद्मैत्री विकास हुन नसक्दा जनधनको क्षति भइरहेकै छ ।